Samachar Batika || News from Nepal » कसरी हुन्छ फेसबुक ह्या’क, कसरी बच्ने ?
कसरी हुन्छ फेसबुक ह्या’क, कसरी बच्ने ?
पोखरा / गत साता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अभिनेता दीपकराज गिरीले दीपाश्री निरौलाको फेसुबक एकाउन्ट ह्या’क भएको जानकारी गराएका थिए । उनले दीपाश्रीसहित कलाकार सरोज खनालको पनि फेसबुक ह्याक भएको बताएका थिए । उनले ह्याकरले चलचित्रकर्मीको फेसबुक ह्या’क गर्दै पैसा माग्न थालेको भन्दै ह्या’करबाट सर्तक रहन सबैलाई सचेत पनि गराएका थिए ।
प्रविधिका कारण अहिले आममानिसको जीवन धेरै सहज बन्दै गएको छ । परम्परागत शैलीमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । नयाँ-नयाँ प्रविधिले अवसरका ढोकाहरू खुला गरेसँगै केही दु’र्घटना पनि निम्त्याएको छ । हामीले प्रविधिलाई जति विस्तृत रुपमा बुझ्दै जान्छौँ, उति नै अचम्म लाग्छ । ना’ङ्गो आँखाले देखिने प्रविधि जति सहज र राम्रो छ, गहिरिएर बुझ्दा उतिनै ड’रलाग्दो र जो’खिमपूर्ण छ । जुन सामान्य मानिसको बुझाइभन्दा धेरै टाढा छ ।
पछिल्लो समय फेसबुक ह्या’क हुने घ’टना सामान्य जस्तै बनिसक्यो । करोडौँको सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ताहरू रहेको फेसबुकका धेरै फाइदा छन् । हामी फेसबुकमा कैयौँ व्यक्तिगत र संस्थागत डाटाहरू समेत राख्ने गर्छौं । जुन डाटाहरू फेसबुक एकाउन्ट ह्या’क हुनेबित्तिकै ह्या’करहरूले चो’र्न सक्छन् ।
फेसबुकले एकाउन्ट होल्डरहरू ह्याकको समस्यामा नपरून् भनेर थुप्रै एप बनाएको छ । तैपनि दैनिकजसो थुप्रै मानिसका फेसबुक ह्या’क भएका घटना सुन्नमा आइरहेका छन् । कैयौँपटक त फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरेर डाटा चो’रेर लगिसक्दा पनि युजरले पत्तोसम्म पाउँदैनन् ।
अधिकांश सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार आफ्नो व्यक्तिगत सूचना अरूसँग बाँड्नु फेसबुक ह्या’क हुने पहिलो माध्यम हो ।
दोस्रो कारण फेसबुकमा आउने गरेको फेक फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गर्नु हो । हामी जब कुनै ह्या’करको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गर्छौ, त्यतिखेरै ह्या’कर्सको आधाभन्दा बढी काम सकिन्छ । कहिलेकाहीँ म्यासेन्जरमा आएका अ’नैतिक लिङ्कहरू नबुझी खोल्दा पनि आइडी ह्या’क हुने सम्भावना रहन्छ ।
प्रकाशित मिति १८ चैत्र २०७७, बुधबार १०:५५